Gbasara Anyị | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Na-akwalite ọganihu mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na usoro mmụta sayensị na-adigide
Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd. (ngwaahịa koodu: 836455), e hiwere na 1999 nke bụ otu n'ime Chinese National High-Tech ụlọ ọrụ ọkachamara na R & D, mmepụta na ahịa nke na-abụghị ọka ethanol na ya mgbada ngwaahịa. Ọ bụ onye na-emepụta ọka ethanol na-enweghị ọka na China, yana onye na-emepụta acetate kachasị ukwuu na North nke China na North-East China. Eresịla ngwaahịa ndị a n'ahịa ụlọ na Eshia, mba Europe na ntụgharị USD150 nde kwa afọ. O nwere ụlọ ọrụ enyemaka abụọ, Tangshan Zhongrong Technology Co., Ltd na Shanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Anyị na-elekwasị anya na ngalaba nke kemịkalụ kemịkalụ, kemịkal kemịkalụ, kemịkalụ kemịkalụ na ume ọhụrụ na ebumnuche nke ịkwalite ọhaneze site na mmepe sayensị na-adigide na R & D, mmepụta, ahịa nke ethanol na-abụghị ọka yana ngwaahịa ya na ala, ma tinye aka na-abụ asọmpi kachasị asọmpi nke ethanol na-abụghị ọka.
Zhongrong Technology Corporation Ltd. nwere 3 Provincial R&D Center ma nweta ihe karịrị 11 sayensị na teknụzụ rụzuru nke dị elu karịa ọkwa ụlọ, yana ihe karịrị 42 mba na ụlọ. Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ na anyị emeela Mmemme Ọchịchị Mba na Mmemme Ngwongwo Ọhụrụ Mba. Anyị bụ ndị mbụ ụlọ ọrụ na China ịzụlite na-abụghị ọka ethanol na-eme ka rụzuru yana metụtara nchọpụta Kemịkalụ. Anyị nwere nnukwu njikwa na teknụzụ sitere n'ọtụtụ mahadum ndị ama ama, ma bụrụ onye mbido na onye nrụpụta nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ethanol ethanol nke China.
Zhongrong Technology bụ onye isi oche nke China Alcohol Association, onye isi oche nke China Green Development Alliance, na teknụzụ ngosipụta teknụzụ na ụlọ ọrụ mmanụ na kemịkal nke China. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị akwakọbawo ogologo oge na-akwado ndị ahịa ma guzobe usoro sistemụ ahịa zuru oke, nke ọ bụghị naanị na-ekpuchi mba ahụ dum, kamakwa ọ bụ mbupụ na ahịa Asia, Europe na South America. Na mgbakwunye na nkwalite mgbasa ozi Internetntanetị ọdịnala, ụlọ ọrụ ahụ bịanyekwara aka na nkwekọrịta nkwado mmekọrịta na ngwa ahịa kemịkal dị ukwuu iji kwe ka ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ na-ejere ọtụtụ ndị ahịa ozi. Anyị nwere olile anya na ndị nwere ezigbo echiche dị elu nwere ike bụrụ ndị ahịa anyị.
Dabere na ethanol na-abụghị ọka, anyị na-akwalite iwupụta ọrụ mmepụta nke ethanol site na iji ụlọ ọrụ ọdụ ọdụ gas, yana ịzụlite teknụzụ ethanol cellulosic, na-amata mmejuputa atumatu nke nrụpụta akụ na ụba, yana ịbịaru iru nde 1 nke ikike ethanol 3-5 afọ. N'otu oge ahụ, anyị na-eji gas ọdụ iji wepụta hydrogen, na-eme nnyocha banyere uru dị elu agbakwunyere agbamume nke ike hydrogen, na iwulite isi ike dị ọcha.
Ngosipụta ikike ikike
The ụlọ ọrụ tumadi na-elekwasị anya na abụọ na ụdị nke nkà na ụzụ ụzọ gasị: chemical na ndu Filiks. N'ime ha, mmepụta nke 300,000 tọn mmanụ ethanol na-emepụta kwa afọ site na iji gas ọdụ ọdụ, mmepụta kwa afọ nke 15,000 tọn nke ngosipụta ethyl ethanol na-eji biogas, na tọn 10,000 nke ngwaọrụ akụrụngwa 1,6-hexane bụ teknụzụ nnwere onwe anyị mepụtara. n’ime afọ ise gara aga.
Ike imepụta ugbu a: tọn 150,000 nke Ethyl Ethanol, tọn 300,000 nke Ethyl Acetate, tọn 50,000 nke mmanya na-egbu egbu, tọn 15,000 nke N-propyl acetate, tọn 10,000 nke 1,6-hexanediol, na tọn 4000 nke Enzyme.